Ulujonga njani ukuThengisa uMxholo? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 24, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le yimbonakalo entle evela kwiBrandpoint yokulinganisa iMpumelelo yokuThengisa uMxholo. Ayizizo zonke iziqulatho zomxholo eziya kuqhuba intengiso, kodwa isantya kunye nokuqokelelwa komxholo ngokuqinisekileyo uqhuba Ulwazi kwaye ngqalelo, ekugqibeleni kukhokelela guquka.
Amaqhinga okuthengisa umxholo njengeposti yebhlog, amanqaku amanqaku, ikopi yewebhusayithi elungiselelwe, amaphepha amhlophe, umxholo wemidiya yoluntu kunye nokukhutshwa kweendaba kuhambisa abathengi kwindlela ethile. Ukuthengisa umxholo kuvelisa ulwazi malunga negama lakho, imveliso okanye inkonzo; ikhuthaza abathengi ukuba bazibandakanye kwaye bakuthathele ingqalelo; eziguqula zibe likhokelo kunye nentengiso; kunye nokudala abameli.
tags: UlwazingqaleloUkuThengiswa kweMpahlaukuguqulwa
Ividiyo: I-B2B ekhokelela ekuLobeni ngeNtengiso ye-Bizo
Jul 25, 2013 ngo-12: 00 AM
Enkosi ngale nto. Okwangoku silinganisela ukuthengiswa komxholo ngokusebenzisa uGoogle Analytics kunye nokudityaniswa kweGNIP.